Bit By Bit - सोध्दै प्रश्नहरू - 3.1 परिचय
डल्फिन अध्ययन गर्ने शोधकर्ताहरूले उनलाई प्रश्न सोध्न सक्दैनन् र यसैले तिनीहरूका व्यवहार देखेर डल्फिन बारे सिक्ने कोसिस गर्न बाध्य छन्। मानवहरू अध्ययन गर्ने शोधकर्ताहरू, अर्कोतर्फ, यो सजिलो छ: तिनीहरूका उत्तरदाताहरूले कुरा गर्न सक्छन्। मानिसहरूसँग कुरा गर्दै विगतमा सामाजिक अनुसन्धानको महत्त्वपूर्ण भाग थियो, र म आशा गर्दछु कि यो भविष्यमा पनि हुनेछ।
सोशल रिसर्चमा, मानिसहरूसँग कुरा गर्दा सामान्य रूपमा दुई रूपहरू हुन्छन्: सर्वेक्षण र गहिरो साक्षात्कार। प्रायः बोल्दै, सर्वेक्षणको प्रयोग गर्दा अनुसन्धानले धेरै सहभागिताहरु, अत्यधिक संरचित प्रश्नावलीहरु को व्यवस्थित भर्ती समावेश गर्दछ, र सांख्यिकीय विधिहरु को उपयोग को एक ठूलो जनसंख्या को प्रतिभागिहरु लाई सामान्यकृत गर्न को लागी। अर्को गहिरो साक्षात्कार प्रयोग गरी अनुसन्धान, सामान्यतया एक सानो संख्यामा सहभागीहरू, अर्ध-संरचित कुराकानीहरू, र सहभागीहरूको एक धनी, गुणात्मक विवरणमा परिणाम समावेश गर्दछ। सर्वेक्षण र गहिरो साक्षात्कार दुवै शक्तिशाली दृष्टिकोणहरू छन्, तर सर्वेक्षण डिजिटल एनालॉगमा एनालॉगबाट संक्रमण द्वारा अधिक प्रभावित हुन्छन्। यसैले, यस अध्यायमा, म सर्वेक्षण अनुसन्धानमा फोकस गर्नेछु।
यस अध्यायमा म यस अध्यायमा देखाउँछु, डिजिटल युगले सर्वेक्षण शोधकर्ताहरूका लागि धेरै रमाइलो अवसरहरू सिर्जना गर्न चाँडै र सस्तो डेटा सङ्कलन गर्न, विभिन्न प्रकारका प्रश्नहरू सोध्न, र ठूलो डाटा स्रोतहरूसँग सर्वेक्षण डेटाको मूल्य बढाइदिन्छ। तथापि सर्वेक्षण अनुसन्धान एक तकनीकी परिवर्तन द्वारा परिवर्तन हुन सक्छ नया, नयाँ छैन। 1970 को वरिपरी एक समान परिवर्तनले विभिन्न संचार प्रविधिद्वारा संचालित गरिएको थियो: टेलिफोन। सौभाग्य देखि, कसरी टेलिभिजन सर्वेक्षण अनुसन्धानले परिवर्तन गर्यो हामीलाई कसरी बुझ्न सक्छ कि कसरी डिजिटल उमेर सर्वेक्षण अनुसन्धान परिवर्तन हुनेछ भनेर कल्पना गर्न सक्छ।
सर्वेक्षण अनुसन्धान, हामी आज यो पहिचान को रूप मा, 1930 को दशक मा शुरू भयो। सर्वेक्षण अनुसन्धानको पहिलो युगको समयमा, शोधकर्ताहरू अनियमित रूपमा भौगोलिक क्षेत्रहरू (जस्तै शहर ब्लकहरू) नमूना गर्नेछन् र त्यसपछि अनियमित रुपमा नमूने भएका परिवारहरूमा मानिसहरूको साथमा कुराकानी गर्ने कुराकानीहरू गर्न ती क्षेत्रहरूमा यात्रा गर्थे। त्यसपछि, टेक्निकल विकास - अमीर देशहरूमा ल्याण्डलाइन फोनको व्यापक प्रसार - अन्ततः सर्वेक्षण अनुसन्धानको दोस्रो चरणको नेतृत्व गर्यो। यो द्वितीय युगमा मानिसहरू कसरी नमूना गरियो र कसरी वार्तालापमा छन्। दोस्रो चरणमा, भौगोलिक क्षेत्रहरूमा परिवारहरूलाई नमूना गर्नुको सट्टा, शोधकर्ताहरूले अनियमित रूपमा टेलिफोन नम्बरहरूलाई अनियमित-अंकल डायल गर्ने भनिन्छ । र मानिसहरूसँग कुराकानी गर्न यात्रा भन्दा अनुहारको सामना गर्नुको सट्टा, शोधकर्ताले बरु फोनमा बोलाए। यी साना साना सैन्य परिवर्तन हुन सक्छ, तर तिनीहरूले छिटो, सस्ता र अधिक लचीला सर्वेक्षण अनुसन्धान गरे। सशक्तिकरणको बावजूद, यो परिवर्तनहरू पनि विवादास्पद थिए किनभने धेरै शोधकर्ताहरू चिन्तित थिए कि यी नयाँ नमूना र साक्षात्कार प्रक्रिया विभिन्न किसिमको परिचय हुन सक्छ। तर अन्त्यमा, धेरै काम पछि, शोधकर्ताहरूले पत्ता लगाए कि कसरी डेटाबेसलाई इष्टतम रूपमा random-digit daling र telephone interviews प्रयोग गरेर एकत्रित गर्ने। यसैले, समाजको टेक्नोलोजिम पूर्वाधार कसरी सफलतापूर्वक उत्प्रेरित गर्ने भन्ने बारे अन्वेषण गरेर, शोधकर्ताहरू उनीहरूले सर्वेक्षण अनुसन्धान कसरी गर्ने भनेर आधुनिकीकृत गर्न सक्थे।
अब, अर्को टेक्निकल विकास - डिजिटल युग - अन्ततः हामीलाई सर्वेक्षण अनुसन्धानको तेस्रो युग ल्याउनेछ। यो संक्रमण द्वितीय-युगको दृष्टिकोणको क्रमशः क्षय (BD Meyer, Mok, and Sullivan 2015) द्वारा भागमा (BD Meyer, Mok, and Sullivan 2015) । उदाहरणको लागि, विभिन्न प्राविधिक र सामाजिक कारणहरूको लागि, गैरप्रणाली दरहरू - यो नमूना व्यक्तिहरूको अनुपात हो जुन सर्वेक्षणमा भाग लिईदैन - धेरै वर्षहरु (National Research Council 2013) लागि बढ्दै गएको छ। यी दीर्घकालीन प्रवृत्तहरूले यो अर्थ हो कि गैर-टेलिभिजन दर मानक फोन सर्वेक्षण (Kohut et al. 2012)0भन्दा बढि90 भन्दा बढी हुन सक्छ।
अर्कोतिर, एक तेस्रो युगमा संक्रमण पनि भाग्यमा नयाँ अवसरहरूद्वारा भागिएको छ, यसका केही म यस अध्यायमा वर्णन गर्नेछु। यद्यपि चीजहरू अझै टाढा छैन, मलाई आशा छ कि सर्वेक्षण अनुसन्धानको तेस्रो युगको गैर-सम्भाव्यता नमूना, कम्प्यूटर-प्रशासित साक्षात्कार, र सर्वेक्षणको लिङ्कले ठूलो डेटा स्रोत (तालिका 3.1) मार्फत गुणित गरिनेछ।
तालिका 3.1: Groves (2011) आधारमा सर्वेक्षण अनुसन्धानका तीन अरे
पहिलो युग सम्भावना सम्भावना नमूना फेस-अनुहार स्ट्यान्ड-एक्लो सर्वेक्षणहरू
दोस्रो पटक अनियमित-अङ्क डायलिंग (RDD) सम्भावना नमूना टेलिफोन स्ट्यान्ड-एक्लो सर्वेक्षणहरू
तेस्रो युग गैर सम्भावना नमूना कम्प्यूटर-प्रशासित सर्वेक्षणहरू ठूलो डाटा स्रोतहरूसँग जोडिएको छ
सर्वेक्षण अनुसन्धान को दोस्रो र तेस्रो ईर को बीच संक्रमण पुरा तरिकाले चिकनी छैन, र शोधकर्ताहरुलाई कसरि अगाडी बढना चाहिए को बारे मा भयंकर बहस भएको छ। पहिलो र दोस्रो ईरानको बीचमा संसोधनमा फर्किँदैछ, मलाई लाग्छ कि हाम्रो लागि अब एक मुख्य अन्तर्दृष्टि हो: सुरु अन्त छैन । त्यो, प्रारम्भिक दोस्रो-युग टेलिफोन-आधारित विधिहरू विज्ञापन हुनुहुन्थ्यो र धेरै राम्रो काम गरेनन्। तर, कडा परिश्रममा, शोधकर्ताहरूले यो समस्या समाधान गरे। उदाहरणका लागि, शोधकर्ताहरु धेरै वर्षहरु को लागि अनियमित-अङ्ग्रेजी डाइलिंग गर्दै रहेको थियो पहिले वरेन मिन्फोफकी र जोसेफ वक्सक्सबर्ग ले एक व्यावहारिक-अंकल डायलिंगिंग नमूना विधि विकसित गरे जुन राम्रो व्यावहारिक र सैद्धांतिक गुणहरु (Waksberg 1978; ??? ) । यसैले, हामीले तेस्रो-युगको अवधारणालाई अन्तिम परिणामको साथ भ्रमित गर्नुपर्दैन।
सर्वेक्षण अनुसन्धानको इतिहासले बताउँछ कि क्षेत्र विकास हुन्छ, प्रविधि र समाजमा परिवर्तन द्वारा संचालित। त्यो विकासलाई रोक्न कुनै तरिका छैन। बरु, हामीले यसलाई गल्ती गर्नुपर्दछ, अघिल्लो युवदेखि बुद्धिलाई आकर्षित गर्न, र यो यस अध्यायमा लिने दृष्टिकोण हो। पहिलो, म बहस गर्नेछु कि ठूलो डेटा स्रोतहरू सर्भरहरू प्रतिस्थापन गर्नेछैनन् र ठूला डेटा स्रोतहरूको बहुतायत बढ्छ - घट्दैन - सर्वेक्षणको मूल्य (खण्ड 3.2)। प्रेरणा दिईयो, म सर्वेक्षण अनुसन्धान को पहिलो दुई ईरान को समयमा विकसित कुल सर्वेक्षण त्रुटि फ्रेमवर्क (सेक्शन 3.3) को सारांश संक्षेप गर्नेछु। यो ढाँचाले हामीलाई प्रतिनिधित्व-विशेष, गैर-सम्भावनात्मक नमूना (खण्ड 3.4) मा नयाँ दृष्टिकोणहरू बुझ्न सक्षम बनाउँछ। - मापदण्ड विशेष गरी नयाँ प्रतिक्रियाहरू, उत्तरदायीहरूलाई सोध्ने नयाँ तरिका (सेक्शन 3.5)। अन्तमा, म सर्वेक्षण डेटा ठूलो डेटा स्रोतहरू (खण्ड 3.6) लाई दुई वटा अनुसन्धान टेम्पलेटको वर्णन गर्नेछु।